Sadex qof oo uu kamid yahay Cabduqaadir Sheekh Maxamed (Aayatulaah) oo ahaa Ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha guud ayaa maanta lagu dilay suuqa Bakaaraha. | JILYAALE_ONLINE
Sadex qof oo uu kamid yahay Cabduqaadir Sheekh Maxamed (Aayatulaah) oo ahaa Ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha guud ayaa maanta lagu dilay suuqa Bakaaraha.
Cabduqaadir Sheekh Maxamed (Aayatulaah) oo ahaa Ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha guud ayaa maanta lagu dilay suuqa Bakaaraha isaga iyo nin ay wada socdeen.
Sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah, Xeer ilaaliyaha ayaa geeriyooday markii gaari uu watay ay bam gudaha u dhigeen kadibna baastoolado ay dhinacyada kala dheceen rag hubeysan oo iyagu kusoo tala galay dilkooda.
Meydka Aayatulaah ayaa muddo saacado ah dhex yiilay gaarigii lagu dilay, waxaana muddo saacado ah hareerihiisa ka dhacayay rasaas iyo qaraxyo ay is weydaarsanayeen ciidamada dowladda iyo Ciidamo hubeysan oo ka soo horjeeday.
Marxuum Aayatuulaah ayaa meydkiisa waxaa galabta meesha ka qaaday dad ay ehel yihiin oo u soo gurmaday markii ay ka war heleen dhimashadiisa.
Marxuum C/qaadir Aayatulaahi ayaa ifka kaga tagay gabar uu dhalay iyo hooyadeed, waxaana uu ahaa 43 jir xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii hore ee Somalia.
← Xiladhibaanadda Barlamaanka KMG ah oo u diyaar garoobaya codbixin loo qaadi doono Dowladda uu hoggaaminayo Ra’isul Wasaare Cali Maxamed Geedi.
Jeneral Jilicoow Caddoow iyo ilaaladiisa ayaa galabta lagu dilay isgoyska afarta Jardiino ee Magaalada Muqdisho. →